पीटी-141 (Bremelanotide): महिला यौन रोगको लागि एक नयाँ ड्रग प्रयोग गरिएको थियो
2। यस्ले कसरी काम गर्छ?
3। पीटी-141 अनुप्रयोग
4। सबै PT-141 को फाइदाहरू
5। यौन रोगको लागि पीटी-एक्सएनमक्स
6। PT-141 कसरी प्रयोग गर्ने
7। PT-141 प्रयोगकर्ताहरूद्वारा साझा अनुभव गर्नुहोस्
8। PT-141 प्रयोग गरी जोखिमहरू
1. पीटी-141 (Bremelanotide)
यौन वृद्धिको लागि प्रशासनमा केही मिनेटमा महिलाहरूमा असीमित उत्पन्न हुन्छ, PT-141 वास्तविक सम्झौता हो। Bremelanotide बाट उत्पन्न मेलानोटान II; यसैले, यो एक नैतिक प्रभावकारी प्रभाव दिन्छ। Melanotan II ले छाला पिग्ने र साथसाथै यौन दुर्व्यवहारको उपचार गर्न सहयोग पुर्याउँछ, जसमा महिलाहरु मा कमजोरी को लागी पनि शामिल छ।
PT-141 पेप्टाइड स्वाभाविक रूपमा अन्य विकास हार्मोन जस्तै शरीरमा उत्पादन गरिएको छैन। पीटी-141 (189691-06-3) melanocortin रिसेप्टर्स को एक गैर-चुनेको एलोनिस्ट रहेको छ केहि समय को लागि यौन विकारहरु को उपचार को लागि प्रयोग मा रहेको छ।
PT-141 को खोज को रूप मा एक यौन वृद्धि यो गल्तीले गर्दा आकर्षक छ। म्याक हडलीको रूपमा चिनिने वैज्ञानिकले आफूलाई नमूनाको रूपमा स्वयंसेवक बनायो र उनी आफ्नै शरीरको साथ प्रयोग गरिरहेको बेला आठ घण्टाको लागि सजिलो भयो। यो Melatonin II को एक डबल खुराक के परिणामस्वरूप, एक परिसर जो पहले की खोज की गई थी।
मेलनोटन परीक्षण पहिलो 1960 मा चूहों मा गरियो र 1980s मा गए। Melanocortins धेरै शारीरिक कार्यहरु को नियमन मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लागि जानिन्छ। Melanotan 1, जो Melanocortin एनालॉग हो, एक टे्यानिंग एजेन्ट को रूप मा परीक्षण गरिएको छ जबकि Melanotan II एक यौन रोग एजेन्ट को रूप मा परीक्षण गरियो।
तथापि, यसको उपयोग को पाया पछि रोकिएको थियो कि यो यसको परीक्षण विषयों को रक्तचाप मा वृद्धि को कारण बन गयो। 2016 मा, पीटी- 141 पेप्टाइड एफडीए द्वारा महिलाहरु मा यौन रोग को उपचार को लागी अनुमोदन गरिएको थियो।
2. यस्ले कसरी काम गर्छ?
PT-141 हाइपोथोममस मार्फत काम गर्दछ, सीधै यौन इच्छामा वृद्धि को लागी। यो मस्तिष्कमा पाइने मेलानोकोर्टिन रिसेप्टरहरूमा बाँध्छ, यसरी यौन अंगहरूमा तंत्रिका सन्देशहरू पठाउँदछ। अन्य सेक्स प्रकोप जस्तै वियाग्वे, जुन भाइरस प्रणालीमा काम गर्दछ, PT141-141 लाई प्रत्यक्ष रूपमा एक लाइबेरियोलाई असर गर्दछ। यही कारण हो कि अन्य सेक्स औषधि को रूप मा हाइफ्रिडिसीएक्स को रूप मा विचार नहीं गर्नु पर्छ किनकी उनि सीधा एक इच्छा को प्रभावित नहीं गर्छन।
पीटी-141 कार्यहरू उत्तेजना र डोपामिन हार्मोन सक्रिय गर्ने, जसले एक यौन प्रेरणा बढाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जान्छ। डोपामिन एक प्रसिद्ध यौगिक हो जुन एक न्यूरोट्रांसमीटर छ र जसको भूमिका प्रदर्शन को उत्तेजित गर्दछ। जब एकसँग कम डियोपिन स्तर छ, यसको मतलब यो हो कि तिनीहरूको लिब्रो पनि कम हुनेछ। PT-141 आधा समय 120 मिनेट वरिपरि छ।
3. पीटी-141 अनुप्रयोग
♣ पीटी-141 नाक स्प्रे
♣ पीटी- 141 क्रीम
♣ पीटी- 141 गोलियाँ
4. सबै PT-141 को फाइदाहरू
♦ यौन सन्तुष्टि बढाउँछ
तपाईं एकै ठाउँमा छ, तपाईं यौन सन्तुष्ट पार्न के गर्न सक्नु भएकोमा आश्चर्य लाग्यो? सच्चाई कहिलेकाहीं यो ठूलो 'ओ' प्राप्त गर्न यौन सम्बन्ध भन्दा बढी लाग्छ। लिंगले तपाईंलाई अर्गसमेसन दिन सक्छ तर दिमागको रूपमा मनन उड्न सक्दैन। महिलाहरु को लागि, यो पुरुषहरु को तुलना मा पनि उनको रचना को कारण अधिक जटिल हुन्छ।
ट्रिगर orgasms मा यौन वृद्धिकर्ताहरूको प्रयोग कम गर्न सकिँदैन। महिलाहरुको लागि पीटी-141 यौनसम्पर्कमा संलग्न भएपछि एकदमै सन्तुष्टिको तीव्र भावना दिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो यौन आनन्द बढाउन उपयोगी को लागी केहि चीजमा हुनुहुन्छ भने, यो चमत्कारिक औषधि निश्चित शर्त हो।
♦ अधिक ऊर्जा दिन्छन्
तपाईं एक उच्च यौन ड्राइव हुन सक्छ तर यो गर्न कुनै बलियो छैन। ऊर्जा को कमी न केवल आफ्नो यौन जीवन मा असर गर्छ तर तपाईंको दिन को दिन को जीवन गतिविधिहरु लाई पनि असर गर्दछ। यसको मतलब यो छ कि तपाई अब केहि मनपर्ने गतिविधिहरूमा संलग्न हुन सक्नुहुनेछ जुन यस प्रकार निष्क्रिय हुन्छ।
ऊर्जाको कमीले तपाईंको लिंग जीवन समाप्त भएको छैन भनेको होइन। निरन्तर चिन्ताको लागि कुनै आवश्यकता छैन किनकी त्यहाँ तपाईले आफ्नो यौन भावनाको साथसाथै ऊर्जा बढावा दिन सक्नुहुनेछ।
एकपटक तपाईंले PT-141 प्रयोग गर्नुभएपछि, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंले अधिक ऊर्जा पाउनु भएको छ र पनि सानो लाग्छ।
♦ यौन भरोसा बढाउनुहोस्
एक महत्त्वपूर्ण कारक मध्ये एक हो कि तपाइँ यौन सम्बन्ध सन्तुष्ट हुनुहुनेछ भन्ने कुरा हो कि तपाईं आफैमा आत्मविश्वास छ। यौन आत्मविश्वास निश्चित छ तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं बिस्तरमा डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको अघिल्ला यौन अनुभवहरूमा तपाइँ र तपाइँको साथीले जंगली अङ्गुरहरू प्राप्त गरेको छ भने, तपाईं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ कि तपाईंले आफ्नो मालिकलाई विश्वास हासिल गर्नुभएको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक यौन अनुभव को एक छ सक्छ। जब तपाईंसँग सुन्दरतामा उच्च भरोसा छ भने सम्पूर्ण अनुभव पहिले देखि नै मनोरञ्जन हुने सम्भव छ। अझ बढी, यो यौन सम्बन्ध हुँदा तपाईंलाई अझ सहज बनाउँछ।
अधिकांश मानिसहरू को लागि, यौन विश्वास प्राप्त गर्न केहि सजिलो छैन किनकि उनीहरूले उनीहरूको कमजोरीहरूले उनलाई टोल लगाए जस्तो लाग्छ। जब तपाईंको विश्वास कम छ, संभोग प्राप्त गर्नु ठूलो सम्झौता हुन्छ। फाइदा यौन उत्प्रेरकको प्रयोगको साथमा आउँछ कि यसले तपाईंलाई सबैभन्दा संतोषजनक यौन मुठभेड बनाउँछ।
पीटी-141 का लागि तपाईंको सबै यौन समस्याको साथमा सौन्दर्यहरू तपाईले सबै सँधै आत्मविश्वास प्रदान गर्नुहुने छ। यौन सम्बन्धी गोपनीय महिलाहरू बिस्तारै यौन सक्रिय र अझ बढी मजा जान्छन्। कुनै आश्चर्य छैन कि प्रयोग महिलाहरुको लागि पीटी-141 दैनिक बढ्छ। एकपटक तपाईंले PT-141 प्रयोग गर्नुभएपछि, म तपाईंलाई प्रतिज्ञा गर्दछु कि तपाईंको यौन विश्वासले कम से कम समय सम्भवतः बढ्न सक्छ।
♦ एक लिबीडो र यौन इच्छा बढाउँछ
तपाईं जान्दछन् कि तपाईंको साथीले तपाईलाई नकली निद्रा वा सिरदर्द जब सेक्सबाट बच्नको लागि तपाईंलाई दिन्छ। जब तपाईंको महत्त्वपूर्ण अन्य यसको लागि तयार छ यो यो पनि निराश हुन्छ, तर यो अन्तिम कुरा हो जुन तपाईं सोच्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईंको सम्बन्धलाई रोक्न सक्छ, विशेषगरि यदि चीजहरू अघिल्लो वर्षहरूमा ठूलो भएको छ।
आज, महिलाहरु को 30 भन्दा बढी महिलाहरु विश्व स्तर मा यौन इच्छा को कमी देखि पीडित छन्। महिलाहरु बीच यो धेरै सामान्य भएको कारण कारण धेरै कारकहरू यसमा योगदान दिन्छन्। यद्यपि कम एस्ट्रोजनको स्तर वा हार्मोनल उत्पादनमा एक पारी केही कारणहरू हुन् जुन एक यौन इच्छाले ब्यासेसेट, जन्म नियन्त्रण गोलहरू, सम्बन्धको मुद्दा, थकान, अवसाद, तनाव, र केहि दबाइ पनि लिन सक्दछ।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि सेक्स मा तपाईंको रुचि कम द्वारा दिन कम हुन्छ, यो सम्मोहक यौन इच्छा विकार को लागि एक लक्षण हुन सक्छ। राम्रो कुरा यो हो कि यौन रोग को लागि पीटी- 141 यो हटाउन मद्दत सक्छ। यसले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं पूर्ण शरीर उर्जा प्राप्त गर्नुहुन्छ र प्राय: चालू हुनुहोस्।
♦ छाला टाँस्नुहोस्
आज छाला क्यान्सर लोकप्रिय भएको छ। अघिल्लो दिनमा, छाला तन एक संकेत थियो कि एक लामो समय सम्म सूर्यको तल काम गरिरहेको थियो। आजकल, छाला तान् उनका लागि मानिन्छ जुन समृद्धिलाई माया गर्छ र स्वस्थ चमक दिन्छ। यसका लागि, सबै प्रकारको ट्याङ्किङले टेन्सन लोशन जस्ता व्यक्तिहरूसँग संलग्नता, सनलेस टेनिंग, आउटडोर टेनिंग, र इनडोर टे्यानिंग, के तपाईले सोच्नुहुन्छ कि टे्यानिङको फाइदा हुन सक्छ?
टेनिंग तपाईंलाई दिइनेछ कि सुनको टोन जसले सबैलाई छोड्ने छ। यदि तपाईं बाहिर उभिएको प्रेमको प्रकार हो भने, छाला क्यान्सर तपाइँको बाल्टी सूचीमा हुनुपर्दछ। हस्तियाँले हजारौं डलर तिर्नुको सट्टा आफ्नो छाला टान गरेको छ किनकी यसले उनीहरूको क्यारियरमा अधिक प्रभाव दिन्छ। हामी दुवै सहमत हुन सक्छौं कि पीला छाला बिरामी र सुस्त देखिन्छ। धेरै भन्दा राम्रो अलमारी हुन सक्छ, राम्रो लगाउने कपाल र सेतो दाँत, एक सुनन ट्यान धेरै ज्यादा संघर्ष गर्न को लागी तपाईंको नजर को प्रशंसा गर्न सक्छ।
यदि तपाइँ बिल्डर बिल्डर हुनुहुन्छ र महसुस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईंको टाउको शरीर देख्न सकिंदैन, तपाईले छाला ट्यानिङ प्रयास गर्नु पर्दछ। एक तन तपाईंको शरीर मा आकृति को बढावा दि्छ, तपाईंको लाभहरु लाई अधिक ध्यान देने योग्य बनाइन्छ। तपाईं संघर्ष गरिरहनुभएको छ र जिम सबैलाई दिइरहेछ, किन त त त पेशी लगाउने प्रशंसा गर्न पाउनु हुन्छ?
तन प्राप्त गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, तर को PT-141 अनुप्रयोग दिन खरिद गर्दछ। सूर्यको धेरै धेरै प्रदर्शनले छालाको क्षति बढाउन सक्छ र अझ पनि खराबले तपाईंलाई छाला क्यान्सर बनाउँछ। पीटी-141 फाइदा मध्ये एक छ कि तपाइँ सुरक्षित र सम्भावित तपाइँलाई दुष्प्रभावको कारण हुन सक्छ। Bremelanotide तपाईंलाई एक सुन्दर तान् दिन्छ, किनभने यसले म्यालनिनको उत्पादनलाई असर गर्छ, जुन छालाको रंगको रंगको लागि उत्तरदायी छ। त्यसैले यदि तपाइँ सधैँ सुरक्षित ट्यानिंग प्रक्रिया चाहानुहुन्छ र एउटा जसले तपाईंलाई शानदार परिणाम प्रदान गर्नेछ, PT-141 (189691-06-3) जाने बाटो हो।
♦ बलियो Erections
क्या तपाईं यसलाई एक स्टिफर निर्माण प्राप्त गर्न को लागि एक चुनौती मिलयो? तपाईं मात्र होइनन्। लाखौं मानिसहरू यसको पीडा भोगिरहेका छन् किनकि प्रायः उनीहरूको बारेमा कसैलाई बताउन शर्मिला महसुस गर्छन्।
प्रत्येक व्यक्ति एक कठिन र बलियो निर्माण चाहन्छ। उनीहरूको लिंगको आकारमा खुसी भइरहे पनि सुखी यौन सम्बन्धको लागि ठोस कारबाहीहरू चट्टान गर्न आवश्यक छ। ठीक छ यदि तपाईं एक मजबूत निर्माण पीटी-141 प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। यो एक महान यौन वृद्धि हो जसले तपाईंको निर्माण चट्टानको रूपमा कडा मेहनत गर्छ भनेर सुनिश्चित गर्नेछ।
5. यौन रोगको लागि पीटी-एक्सएनमक्स
(1)। अन्य यौन वृद्धिको साथ तुलना
PT-141 अन्य लै enhance्गिक वृद्धिकर्ताहरू जस्तै वायग्रासँग धेरै समानताहरू साझा गर्दछ, तर त्यहाँ केही भिन्नताहरू पनि छन्। पहिले नै भनिएझैं PT-141 हाइपोथैलेमस मार्फत काम गर्दछ त्यसैले तपाईंको यौन इच्छालाई सीधा असर गर्दछ। अर्कोतर्फ, रक्तसञ्चार प्रणालीमा अन्य कामहरू शरीरमा बग्ने रगतको मात्रा बढेर, विशेष गरी जननांगहरूमा। त्यस्ता यौन वृद्धिकर्ताहरूलाई कामोद्दीपक भनिन सकिदैन।
पीटी-141 समीक्षाहरूको रिपोर्ट अनुसार, पीटी-141 नतिजाहरूले प्रभावको अनुभव गर्न कम्तिमा समय लिन्छन्। उदाहरणका लागि, केही महिलाहरूले केही मिनेट भित्र केही परिवर्तनहरू गर्दा अरूको लागि हुन सक्छ, यसले घण्टा लाग्न सक्छ। सबै मा, पीटी-एक्सएनएक्सएक्स एक छिटो अभिनय यौन वृद्धि को एक छ जसको यौन दुर्व्यवहार को प्रभाव कम से कम समय को भित्र महसूस गर्न सकिन्छ।
(2)। के पीटी-141 महिलाहरूको लागि उपयुक्त छ?
पुरुष र महिला दुवै पीटी- 141 प्रयोग को रूप मा, यो महिलाहरु को पसंदीदा साबित भएको छ। यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई उनीहरूको भन्दा धेरै फाइदाहरू र कम साइड इफेक्टहरू तुलना गर्दछ। एक मात्र लक्षण जसले तिनीहरूलाई असर गर्छ, विलक्षण र उल्टी हो, जुन दुर्लभ पनि छ।
साथै, महिलाले पुरुषहरूको तुलनामा औषधीलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिए। पीटी- 141 महिलाहरूलाई उद्धारकर्ताको रुपमा आउँछ किनभने त्यहाँ महिलाहरू यौन दुर्व्यवहारको साथ धेरै कम औषधि छन्।
6. PT-141 कसरी प्रयोग गर्ने
पीटी-141 अनुप्रयोगको सबैभन्दा सामान्य तरिका इंजेक्शनको माध्यम हो। यो इंजेक्शन सामान्यतया यौन दुरुपयोगका समस्याहरूको उपचारमा पुरुष र महिला दुवैको लागि उपयोगी छ।
इंजेक्शन सामान्यतया subcutaneously प्रशासनिक गरिन्छ, जहां अधिक मोटा जमा छन्। अक्सर, इंजेक्शन को अंक पेट क्षेत्र को आसपास र कम पेट या जांघ को आसपास हो। जेबहरू दिनको एउटै समयमा दिइन्छ ताकि तपाईलाई सबभन्दा उत्तम प्राप्त गर्न सक्दछ पीटी-141 अनुभव.
पुरुष र महिला दुवै को लागि सामान्य पीटी-एक्सएनएमएक्स खुराक 141mg हो, जुन लिंग भन्दा पहिले एक घण्टा दिनुपर्दछ। यदि यो पहिलो पटक गरिसकेपछि, तपाईले 2mg इन्जेक्शन डोजको रूपमा इन्जेक्स गर्न सक्नु अघि अन्य 1mg तीस मिनेट पछि।
ओभरडाइमबाट बच्नको लागि, तपाईले सातौं घण्टामा 2mg भन्दा बढी हुनुपर्दछ। तपाईंले सँधै उत्तम समय छान्नु पर्छ, जुन तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
PT-141 नाक स्प्रे PT-141 को लागी अर्को साधारण तरिका हो। धेरै मानिसहरूले यसलाई मनपर्छ किनभने यो प्रयोग गर्न सजिलो छ। केवल PT-141 inhaling गरेर, तपाईं खोज्दै लिबिया प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ PT-141 नाक स्प्रे अनुप्रयोगको लागी चरणहरू छन्;
औषधिको लागि पासपोर्ट खाली गर्न आफ्नो नाकलाई धीरज उडाउनुहोस्।
प्रशासक गर्नु अघि प्याकेजिङ्गमा सबै निर्देशनहरू पढ्नुहोस्। प्रयोग गर्नु अघि हिँड्नुहोस् र यदि सानो संकेत गरिन्छ भने सानो रकम निस्क्रिय गर्नुहोस्।
तपाईंको मुखले द्रुत रूपमा बोतल निस्कनुहोस् र दबाइलाई बन्द गर्नुहोस्। त्यो एक ईमानदार स्थितिमा हुँदा लागू हुन सक्दछ ताकि तपाईंले आफ्नो टाउको पछाडि झुकाउनु पर्दैन। सधैँ बोतल सफा राख्नुहोस् र छाड्नबाट बचाउनको लागी।
मेरो libido सामान्यमा फिर्ता छ
एग्नेसन के भन्छन्, "सुरुमा मैले यो उत्पादनलाई छालाको क्यान्सरको लागि किन्। मेरो छाला यति राम्रो प्रतिक्रिया भएको छ, र मैले यसको प्रयोग जारी राख्न निर्णय गरे। एक कुराले मलाई पीटी-एक्सएनमक्स अनुभवलाई प्रेम गरेको छ तथ्य यो कि एक लाइबेरो बढ्छ। मैले सोचेको छैन कि मेरो लिबडो कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैनन् किनभने मैले लगभग सबै पूरै प्रयास गरेकी छु जुन जादुई गोलहरु को लागी कुनै लाभ छैन। पहिलो रात मैले यो प्रयोग गरे, मेरो इच्छा त्यहाँ छ। म अब मेरो साथीसँग हरेक रातको आनन्द लिन्छु। म आफैलाई सोचिरहेको छु किन म पहिले यसको बारेमा थाहा छैन। वास्तवमा, म धेरै फरक महसुस गर्न सक्छु। "
केहि साइड इफेक्ट
Lilian D. भन्छन्, "मैले सम्झन सकेसम्म मेरो लागि असामान्य सेक्स भएको छु। मेरो libido एक अग्रिम देखि पनि अघिल्लो भाग को समयमा केहि पनि महसुस गर्न गए। मलाई केहि डाकिहरु संग मेरो डाक्टर संग निर्धारित गरिएको थियो, र मैले यसको साइड इफेक्ट देखि घृणा गरे, खासकर तेजी देखि दिल को धब्बे र अनिद्रा। मेरो पीटी-141 अनुभव छ, तथापि, फरक छ। म शायद नै कुनै पनि साइड इफेक्ट देखि पीडित, र यहां सम्म कि पीटी-141 समीक्षाहरू मैले अनलाईन पढेको छु, केहि मान्छेले पनि कुनै पनि संकटमा पारेको छ। यस यौन वृद्धि संग, अब म धेरै साइड इफेक्ट देखि दुखाइ को मूल्य को बिना मेरी सेक्स जीवन को आनंद ले सकते हो। धन्यवाद, पीटी-141।
उत्तम परिणाम प्रदान गर्दछ
Maggie S. भन्छन्, "म छालाको क्यान्सरको आदी हुँ र पछिल्लो पन्ध्र वर्षको लागि गरिरहेको छु। मैले PT-141 समीक्षाहरू पढेपछि यो उत्पादनको प्रयास गर्न सोचे र केही फोटोहरू देख्न र पछि हेर्नु भएको छ कि यसले कसरी राम्रो तवरमा प्राकृतिक तान्न सक्छ। म अचम्म लाग्दछु र नतिजा बाट प्रसन्न छु। म प्रयोग गरिरहेको टेनिंग लोशन मलाई घृणित गन्धको साथ छोडिरहेको छु, तर अहिले अतीतको कुरा हो। नारंगी रंगले मलाई दिइयो, र मलाई प्राकृतिक छ। म यस तथ्यलाई प्रेम गर्छु कि सबैले सोच्दै कि म यो जस्तै जन्मिएको थिएँ। यो प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईले कहिल्यै पछाडि फर्केर आउनुहुन्न। "
यसले उत्तम अंगहरू दिन्छ
बेंजामिन प्याटरसन भन्छन्, "हालै, मेरी श्रीमतीले अङ्ग्रेजहरू रोक्न थाले, र मैले सबै प्रयास गरेँ र चट्टानमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ। उनले चासो गुमाए, र म कसैलाई मेरो यौन विश्वास गुमायो किनभने मलाई लाग्यो कि मैले उनको सन्तुष्ट पार्न सकेन। मैले चिकित्सकसँग कुरा गरेँ, र उनले सुझाव दिए कि मैले यो प्रयास गरें। म यसको बारेमा केहि शंकास्पद थियो तर मेरी श्रीमतीलाई उनको जन्मदिनमा उपहार दिने निर्णय गरें र हेर्नुहोस् कि यो कसरी जान्छ। मेरो अचम्ममा, हामीले त्यो राति राम्रो थियो। उनीहरु सबै भन्दा सानो स्पर्शमा उठे र मलाई भन्यो कि उनको वर्षको लागि त्यस्ता बलियो अंगहरु थिएनन्। मैले राम्रो लाग्यो कि अन्तमा, मेरी श्रीमतीले हाम्रो मायालु आनन्द उठाउन सक्थे। हामीले हाम्रो अर्को ढुवानीको लागि मात्र आदेश दिएका छौं र यसको लागि पर्खन सक्दैनौं। म यो कसैलाई सिफारिस गर्दछु जसले तिनीहरूसँग संक्रामक हुन सक्दैन। "
जेस्का एस भन्छन्, "यो यौन वृद्धि सबैभन्दा उत्तम उत्पादन हो जुन मैले अहिलेसम्म आएको छु। मैले सताएको स्वास्थ्य परिस्थितिको कारण मैले कमजोरीमा रजोनिवृत्तिलाई बिर्सेको थिएँ, र चीजहरू कहिल्यै पनि त्यहि भएन। योनिको सुक्खापन भन्दा कम र असुविधाजनक महसुस हुन्छ, म सधैं जोगिन सक्छु किनभने मैले यौन सम्बन्धमा कहिल्यै आनन्द उठाएन। पीटी-141 ले मलाई विशेष गरी मेरो अंगहरुसंग सहयोग गरेको छ। मलाई सक्षम बनाइयो, र म सधैँ यो चाहन्छु। मेरो पति भन्छिन् कि म यो सेक्सी भएन र अहिले पनि यसलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु। पीटी-एक्सएनक्सले मेरो विवाहको जीवनमा ठूलो भिन्नता बनाएको छ, र म सधैंभरि धन्यबाद छु। यो हरेक पैसा पनि लायक छ। "
8.PT-141 प्रयोग गरी जोखिमहरू
धेरै मानिसहरूले यो औषधी लिन्छन्, सकारात्मक अनुभव गर्छन् पीटी-141 परिणामहरू। कुनै आश्चर्य छ कि तिनीहरू अझै पनि यौन रोग र तान उनको छालाको उपचार गर्न पनि यसको भरोसा राख्छन्। यद्यपि यो सबै प्रस्ताव गर्दछ, यो जान्न आवश्यक छ कि त्यहाँ PT-141 फाइदाहरू जस्तै यो जोखिम हो।
यो मतलब छैन कि तपाईं दुष्प्रभावहरूबाट ग्रस्त हुनु पर्छ; बरु, त्यहाँ जोखिम छ जुन अवांछित वा अप्रत्याशित हुन सक्छ। केहि धेरै नम्र हुन सक्छ कि तपाईं मुश्किल देखि नोटिस हुनेछ। अन्यहरू यसको दुई दुई घण्टा भित्र प्रयोगमा जान्छन्। यहाँ केही साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईंले पीटी-141 प्रयोग गर्नुहुँदा एक पटक तपाईंले पीडित हुन सक्नुहुन्छ;
यौन अपराध बढ्यो - कोहीले यौन दुर्व्यवहार र यौन हिंसाको अन्य रूपहरू संलग्न गर्न यो औषधीको फाइदा लिन सक्छ। यही कारणले कि कसैले आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रण गर्न तयार नहुन सक्छ किनकि एक यौन अपराध गर्दछन्।
यौन चाहना जुन टाढा नहुने छैन - यौन सम्बन्धको लागि अत्यधिक आग्रह गर्नु भनेको यो एक प्रभाव हो जसले तपाईलाई यो औषधी लिन पछि सम्भावित हुन्छ।
यो औषधि इंजेक्शन पछि तुरुन्त झरना
चिकित्सा जटिलताहरू, जस्तै उच्च रक्तचाप
इंजेक्शन साइटमा दुखाइ - इंजेक्शनहरू प्रशासनिक पछि कम असम्भव हुन जान्छ। यो सामान्यतया सामान्यतया सामान्य हुन्छ जबसम्म दुखाइ गम्भीर हुन्छ वा साइट संक्रमण हुन्छ। यस्तो घटनाबाट बच्नको लागि, इन्जेक्शन दिनको लागि सधैँ बाँझ सुई प्रयोग गर्नुहोस्।
माथिल्लो श्वसन संक्रमण
साझेदार हुनु सबै गुलाब, प्याराथर्ट, चकलेट र रोमान्स हुनु पर्दछ। यदि यो तपाईंको लागि स्थिति छैन भने, तपाईं आफैं चिन्तित हुन सक्नु भएको छ, विशेषगरि यदि तपाईं लिबिदो समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने। एक सम्बन्धमा यौन महत्त्वपूर्ण मात्र होइन, तर यो मानव जीवनको अभिन्न भाग हो। राम्रो सेक्स जीवन भएकोले एकको समग्र भलाइलाई सुधार गर्न साबित भएको छ र केहि बीमारहरू पनि पीडितलाई रोक्न।
यदि तपाईंले महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईंको यौन जीवन बोरिंग भएको छ, र तपाईं धीरे-धीरे चासो गुमाउनु भएको छ, तपाईलाई आफ्नो यौन खुशीमा लगानी गर्न आवश्यक छ। तपाईंको खोजीमा केहि सेक्स सम्बन्धी जीवनलाई तातो दिनको लागि, तपाई सम्भवतः धेरै सुझावहरू र ट्रिक्सहरूमा आउन सक्नुहुन्छ जुन कुनै परिवर्तन नगर्न सक्छ। समावेश गरेर सेक्स वृद्धि, तपाईं यौन बनाउन रमाइलो बनाउन रमाइलो बनाउन सक्नुहुन्छ।
आज बजारमा धेरै अधिक-काउ-काउन्टर सेक्स एन्टिन्सरले तपाईलाई लिभोदो र सहनशीलतामा वृद्धि गर्छ। प्रायः यिनीहरू मात्र स्टन्टहरू हुन् कि विक्रेताहरूले बिक्री रणनीतिहरूको रूपमा प्रयोग गर्छन्।
वास्तवमा, यी पूरक मध्ये अधिकांश चिकित्सकहरु लाई अनुसन्धान गरीएको छैन र तपाई के भनिएको छ कि सही नहुन सक्छ। यौन वृद्धिको लागि बसोबास गर्नुभन्दा पहिले, तपाईंले एक को लागि सुरक्षित राख्नुपर्छ जुन तपाईंको लागि सुरक्षित छ, र त्यो एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताबाट छ। जब तपाईं आफ्नो दराजको साथमा अनधिकृत एन्टिन्सेन्जर स्टक गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ गुणस्तरको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ।
यदि तपाई अझै पनि सोचिरहनुभएको छ कि यौन वृद्धि कसरी खरीद गर्न र कहाँ किन्नको लागि, त्यसोभए हामी तपाईलाई यो निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। हामी सबै भन्दा राम्रो छौ पीटी-141 निर्माता जसले तपाईंलाई यौन रोगको लागि उत्तम PT-141 प्रदान गर्दछ। आज तपाईंको सेक्स ड्राइभ किन अपग्रेड गर्दैन?
2019-10-30 1 मा: 38 बजे
हेलो, पबल्भरमा मेडिकमेन्ट अउच मर्छ?
2019-10-313मा: 33
Ja, aber wenn Sie PT141 für sich selbst verwenden, wird der fertige PT141 empfohlen। Es ist PT141 Injektion।